Bahanan’ny Rosiana mpanampim-peo ny tranonkalam-panampiana ara-pitsarana tsy mitady tombom-barotra OVD-Info · Global Voices teny Malagasy
Tetikasam-piarovana zon'olombelona lehibe ao Rosia ny OVD-Info
Voadika ny 28 Desambra 2021 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, македонски, Español, українська, Italiano, English
Denis Shedov Solontenan'ny OVD-Info niteny nandritra ny tapatapak'ahitra anjotra momba ny “kasinga vahiny”, 22 Novambra 2021. Pikantsary avy amin'ny OVD-Info / YouTube, CC BY 3.0.
Nanambara ny OVD-Info, fikambanana Rosiana iray malaza amin'ny fanampiana ara-pitsarana sy ny zon'olombelona tamin'ny 25 Desambra fa nobahanan'ny Roskomnadzor, mpandrindra ny aterineto sy ny media ao Rosia, ny tranonkalany.
Na dia nampiseho aza ny rejisi-panjakana fa nobahanana ny tranonkalany noho ny didim-pitsarana nivoaka tao amin'ny distrikan'i Moskoa tamin'ny 20 desambra, dia tsy nisy ny torohay amin'izay antony nisian'ny fanakanana. Ny ampitso, nifandraisan'ny Roskomnadzor ihany koa ny sehatra media sosialy maro nanaovana fitakiana hanakana ny kaontin'ny OVD-Info. Nesorin‘Yandex, mili-pikarohana voalohany ao Rosia, tao amin'ny voka-pitadiavana ihany koa ny tranonkalan'ny OVD-Info taorian'ny fibahanana, araka ny tranonkalam-baovao mahaleotena Mediazona.
Nilaza tamin'ny sampam-panangonam-baovaom-panjakana Interfax ny solontenan'ny Roskomnadzor fa tena nilaina ny fibahanana ny pejin'ny OVD-Info satria miady torohay “voarara” efa voasokajy ho “propagandin'ny an-tendrony (extremisme) sy ny fampihorohoroana”, na dia tsy notondroin'ny mpandamina akory aza hoe inona ilay votoaty manitsakitsaka ny lalàna rosiana.
Tao amin'ny fanambaràna iray, nosoritan'i Grigory Okhotin, mpiara-manorina ny OVD-Info, fa tsy midika velively ny didim-pitsarana hoe “extremiste” ny fikambanana ary tsy nisy ny fiarovana izany tao amin'ny raharaham-pitsarana (ary tsy antom-piantsoana velively hisian'ny fihainoana tao amin'ny fitsarana).
Tetikasam-pampitam-baovao tsy miankina ny OVD-Info nikendrena hanaovana fiarovana ara-pitsarana sy ny zon'olombelona ary mifantoka amin'ny fanenjehana ara-politika ao Rosia. Ny nanirahana azy dia ny “hanampy ireo nenjehina tamin'ny fampiasana ny zony afa-mamory olona malalaka sy ireo zo fototra ara-politika hafa”. Manolo-tanana ireo ekipa ao amin'ny fikambanana ho an'ireo nohazonina nandritra ny hetsi-panoherana sy hanangona torohay antsipiriany amin'ny raharaham-panjakana sy ady heloka bevava niainga avy amin'ny hetsika ara-politika sy mifandraika amin'ny fanaovana hetsi-panoherana.
Tamin'ny Septambra 2021, notondroin'ny minisiteran'ny fitsarana ao Rosia ho “kasinga vahiny” ny OVD-Info, tamin'ny fanamarinana ny fanapahan-keviny fa mahazo vatsy amin'ny ampahany avy amin'ny Foibe Fahatsiarovana ny Zon'Olombelona (izay vao nahazo ny fanondroana azy ho kasinga vahiny ary miatrika ny fanakatonana azy ao Rosia) ny OVD-Info. Nilaza ihany koa ireo mpitsara izay niantso ny minisiteran'ny fitsarana tamin'izany fotoana izany fa ny OVD-Info dia namoaka “torolalana amin'ny fomba idifiana fanasaziana noho ny fanitsakitsahana ara-pitsarana sy/na extremisme”.
Nilaza i Okhotin avy ao amin'ny OVD-Info fa tsy ho atao mahagaga ny fihetsiky ny fanjakana:
Hitanay ho fanohizana ny fanafihan'ny fanjakana amin'ny fiarahamonim-pirenena izao. Tsy mahagaga raha mifantoka amin'ny OVD-Info ny fanafihana amin'izao fotoana izao, satria ny tetikasanay no mety ho tetikasa lehibe indrindra fiarovana ny zon'olobelona eto Rosia amin'izao fotoana izao. Tsy afa-miteny mihitsy izahay fa tsy noheverina tao an-tsainay izao fanafihana izao, satria rehefa taorian'ny fanafihana nihatra tamin'ny Foibe Fahatsiarovana ny Zon'Olombelona sy ny fiampangana izay mitovy, dia izahay no manaraka. […]
Ankilan'izay, ny OVD-Info no mpanamory lehibe indrindra amin'ny fanentanana fanafoanana ny lalànan'ny “kasinga vahiny”: taorian'ny famoahanay ny fanangonan-tsonia mitovy amin'izany dia nampiana lisitra ho ao amin'ny “kasinga vahiny” izahay; Taorian'ny nametrahanay ny volavolan-dalàna [hanafoanana ilay lalàna] tao amin'ny Duma m-panjakana (parlemanta – GV), dia nobahanana ny tranonkalanay. Izany no fomba fakan-kevitry ny manampahefana ny vondrom-piarahamonina matihanina arakasa.
Nandritra ny dinika fohy nifanaovana tamin'ny gazety, rehefa nanontanian'ny mpanangom-baovaon'ny Akon'i Moskoa momba ny raharaha anenjehana ny Memorial (Fahatsiarovana) sy ny OVD-Info, dia tsy nahita izany ho “fironana (arahan'ny maro maso)” ny sekretera misahana ny gazety ao amin'ny Filoha Potinina, Dmitry Peskov:
Raharaha tsy ahenoan-dresabe ireny, sy ny sasany manakoako avy amin'ny fomba fijerin'ny besinimaro, ny sasany tsy dia malaza, saingy tsy mihevitra izahay fa be ny manara-baovao momba azy ity. Tsy mahita fironana mihitsy izahay.
Nampanantena i Okhotin sy ny OVD-Info fa hanohy ny asany ao Rosia ary hampiasa ny fomba rehetra ara-pitsarana hanaporofo fa “azo itokisana ny torohainay rehetra ary tsy manitsakitsaka lalàna”.
Na dia voabahana aza ny pejin-tambajotra sosialy rehetra misy anay, dia mbola hanohy izahay amin'ny fanaovana tolo-tanana ara-pitsarana ho an'ireo olona enjehina noho ny antony ara-politika ary hahita ny fomba hizaràna torohay tsy azo ialana sy manandanja aminareo.